Sidee Ku Heli Karnaa Hooyo Caafimad Qabto, Saan u Lehno Cunig Caafimaad Qabo? |
Tuke Somalism, September 30, 2015
Abshiro Axmed Cabdi — April 22, 2019
Hooyada uurka leh haday qaadato cunto wanaagsan waxaan helaynaa Hooyo Caafimaada qabto iyo Cunig Caafimaada qabo.
Hooyada haday uura yeelato waxaa laga rabaa in ay qaadato inka badan inti ay horay uqaadan jirtay.maxaa yeelay cuntada ay qaadato waxaa laqeyb sanayo cuniga ay caloosha ku Jiro.
Dadka qaar ayaa aaminsan hadii ” hooyad ay qaadato cunto wanaagsan in cuniga ku korayo oo aysan dhali karin”. Tanina waa Fekrad qaldan.maxaa yeelay hadii hooyadu qaadan cunto wanaagsan Sidee loo helaa Cunig Caafimaada qabo.Sababtoo ah Cuntada waxay Difaaca unoqonaysaa Cuniga iyo hooyadaba.
Cuntooyinka laga rabo Hooyada uurka leh in ay qaadato waa inay ka koobanaadaa 3 qeybood:
Carbondhyrate(karboona haydareeda): sida bariiaka, Burka, Galeyda iyo Qamadiga.
Protien(bortiina): sida Digirta, Ukunta, farmajada, maleyga, looska iyo caanaha.
Fruit and vegetable(miro iyo khudaara): sida Canbaha, papayga, karootada, liin banbeelamada, liin dhanaanta iyo qudaarta Cagaaran.
Hooyada uurka leh waxa laga rabaa in ay Qaadato Iron iyo folic acid. Ironta waxay ka hortagtaa in hooyadu Dhiiga la’aan(Anemia) ku dhacto. Folic acidkana waxuu ka hortagaa dhibaatoyinka uu cunigu ku dhalankaro Tusaale ahaan: in uu cunigu ku dhashto isaga oo Faruuran.
Cuntooyinka laga helo Ironta:
Hooyoyinka uurka leh waxay si qaasa ah qatar ugu jiraan Dhiiga la’aan (Anemia) lakin hooyada haday qaadato cunto Iron ku jirto waxay ka caawinee in ay dhiiga la’aanta ka hortagto iyo uga bogsooto oo ay daawo unoqoto.
5. Gudaarta Cagaaran.
Kuwan waxay aas-aas u yihiin cuntooyinka laga helo Ironta.
Waa maxay Dhiiga la’aan(Anemia)?
Dhiiga la’aantu waa Ironta oo ku yaraato dhiiga. Dhiiga la’aantu waxay si qaas ah dhaawac ugaystadaa hooyooyinka uurka leh. Maxaa yeelay hooyada uurka leh waxaa kabaxo dhiiga badan markay dhalayso. Waxayn qatar ugu jirtaa in ay u dhimmato.hadaan laga hortagin.
Waa maxay Calaamadaha lagu garto Dhiig la’aanta?
In ay cadaato isha qeybteeda hoose, sidoo kale waxaa cadaanayo Bushumaha iyo Cidiyaha.
1. Daala badan.
3. Neefto oo marmar ku adkaato.
4. Wadnaha oo saaid u garaacmo.
Hooyada hadii Calaamadahaan isku aragto waa in qaadato Iron madan. Sidoo kale waxay qaadan kartaa 300mg Ferrous sulfate maalinkii 2 mar. Waxaa inay wado ilaa ay kadhalayso.
F.G: Hadaan helno Hooyo Caafimad qabto waxayn Helaynaa Dhalaan Caafimad qabo, Dhalaan Caafimad qabto waa Bulsho Caafimad qabto, Bulsho Caafimad qabtana waa Daldhisan.
Tags: Saan u Lehno Cunig Caafimaad Qabo?Sidee Ku Heli Karnaa Hooyo Caafimad Qabto
Next post Kaalinta Dastuurka Soomaaliya ku Leeyahay Khilaafka Madaxda Dowladda Federaalka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada!
Previous post 10-ka Fikrado Ganacsi Aad Bilaabi Karto Adigoo Gurigaaga Jooga